दोस्रो सेमिफाइनलमा आज थ्रीस्टार र एपिएफ भिड्दै – Khel Dainik
दोस्रो सेमिफाइनलमा आज थ्रीस्टार र एपिएफ भिड्दै
सर्लाही (खेलदैनिक) । प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण लालबन्दी गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज दावेदार रुस्लान थ्रीस्टार क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब भिड्दै छन् । आज जित हात पार्ने टोलीले शनिबार हुने फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ ।
सेमिफाइनल यात्रा तय गर्ने क्रममा एपिएफले आफ्नो पहिलो खेलमा युनाइटेड सिक्किम, भारतलाई हराएको थियो भने क्वाटरफाइनलमा विजय युथ क्लब, हेटौडालाई पराजित गरेको थियो । उता सोझै बाई पाएर क्वाटरफाइनलमा भिडेको थ्रीस्टारले भने कास्की–११ लाई हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा पक्का गरेको थियो ।
लालबन्दी–६, सर्लाहीस्थित राधाकृष्ण खेलमैदानमा आज हुने सेमिफाइनल भिडन्त पनि रोचक हुने अनुमान छ । यद्यपि खेलमा थ्रीस्टारलाई नै बलियो प्रत्याशी मानिएको छ । केही नयाँ अनुहारका साथ उत्रिने दुवै टोलीबीचको भिडन्त प्रतिस्पर्धात्मक पनि हुने अनुमान छ ।
कति होला त आजको नतिजा ? को पुग्ला फाइनलमा ? अनुमान लगाउनुहोस् ।
← ग्रेट हिमालय तीन विकेटले विजयी वडा नं. १ मेयर कपको फाईनलमा प्रवेश →
विदेशिए युवा फुटबलर दर्शन जेष्ठ ३१, २०७५
नेपाल यु–२० टोलीको बन्द प्रशिक्षणबाट ११ खेलाडी आउट जेष्ठ ३१, २०७५
साफ महिला च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने तय जेष्ठ ३१, २०७५
टिवाइटी कपः अन्तिम खेलमा पनि एनआरटीको फराकिलो हार जेष्ठ ३१, २०७५